Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguVasilis
Ijonge kwidama lokuqubha labucala kunye nemibono yolwandle, indawo entle yasemaphandleni, "iGouves Filoxenia Luxury Villa" ibekwe eGouves, eCrete. Esona sixeko siphambili saseHeraklion sikumgama nje oziikhilomitha ezili-17. Siyakumema ukuba ube namava okuBuka iindwendwe kwethu
"I-Gouves Filoxenia Luxury Villa" inendawo yokuqubha yabucala eneendawo zokuhlala zelanga ukuze iindwendwe zethu zonwabele ixesha lokuphumla ngokwenene.
Umgangatho ophantsi unekhitshi elinazo zonke izinto zale mihla ezifana ne-oveni yombane, i-oveni, i-microwave, i-toaster, igumbi lokutyela, indawo yokuhlala bonke abanombono ophefumlayo wale ndawo. Kukwakho neWC.
Umgangatho wokuqala unamagumbi okulala ama-3 aneebhalkhoni ezinombono wepanoramic ukusuka eChersonissos kwaye uphele kwizibane zokumisa ebusuku kwisikhululo seenqwelomoya saseHeraklion.
Kufutshane kakhulu nequla lokuqubha kukho indawo yokuhlala eyongezelelweyo ethathwa njengeyimfihlo kwaye umntu angasebenzisa eso sithuba soxolo noxolo. Kukho ibala lokudlala labantwana kunye nendawo enkulu egqunyiweyo (pergola) eneendawo zokuhlala eziphangaleleyo. Enye yazo isetyenziselwa ukutya kwangaphandle kunye nezixhobo ze-BBQ / igrill kunye nendawo enye yokuhlala.
Kukho indawo yokupaka yabucala egqunyiweyo.
Kanye ngasemva kwiVilla kukho icawa encinci yosapho owamkelekileyo ukuba uyindwendwele.
Unombono omncinci wendawo oyikhethileyo ngeeholide zakho!
Ukuthi ndlela-ntle, siza kulugcina uncumo lwakho olwanelisayo njengesikhumbuzo nanjengesithembiso…..ukuba uya kubuyela kuthi!
Ukuthengwa kwesi sakhiwo ngokuqinisekileyo kwakungukhetho lomntu, ngenzame yokubalekela kwimihla ngemihla. Sasikhangela indawo edibanisa ulwandle nentaba, engekude kodwa ethe cwaka kwangaxeshanye.
Kangangoko bafuna kwaye bafuna. Siya kuba secaleni kwabo kulo naluphi na uncedo abaludingayo nangaliphi na ixesha abalifunayo.
Inombolo yomthetho: 91003224901